Shimbiraha jumlada jumlada QL-1518 soo-saaraha iyo alaab-hayaha toosinta | Qundeli
sheyga MAYA .: QL-1518
shay MAYA. QL-1518 jinsiga nin
Classic ah oo waara
Sibiblahaani wuxuu adeegsadaa alaab tayo sare leh taas oo hubin karta in kabaha aan ur lahayn oo aad u waara.
Fudud iyo ilaalin
Kabahaas kabaha ah waa raaxo, jilicsan, khafiif ah, waara, si sahlan loo nadiifiyo oo dhaqso loo qalajiyo.
Keliya leh naqshad gaar ah, oo dooratay alaab EVA-Sare-Elastic ah, waxay leedahay iska caabin simbiriirixan oo wanaagsan, oo ay weheliso cadaadiska miisaanka jidhka bini'aadamka oo kordhay khilaaf si ay dheelitirka u sii fiicnaato, gaar ahaan loo isticmaalo qubeyska.
Sibiblahaani wuxuu adeegsadaa qalab tayo sare leh kaas oo hubin kara in kabaha aan ur lahayn oo aad u adkaysan kara. Kabahaasi waa raaxo, jilicsan, khafiif ah, waara, fududahay in la nadiifiyo oo degdeg loo qalajiyo.
Keliya leh naqshad gaar ah, oo dooratay alaab EVA-Sare-Elastic ah, waxay leedahay iska caabin siibid wanaagsan, oo ay weheliso cadaadiska miisaanka jidhka bini'aadamka oo kordhay khilaaf si ay dheelitirka u sii fiicnaato, gaar ahaan loo isticmaalo qubayska. adiga oo ammaan ah oo raaxo leh ayaad ku socotaa dabaq kasta oo sibiq ah.
Kabaha kabaha ayaa ku habboon xilli kasta sida qolka qubeyska, qolka jiifka, qolka labiska, jikada, qolka fadhiga, beerta, barkadda, jimicsiga, iyo xitaa agagaarka guriga, xeebta iwm.
Ku raaxayso wakhtigaaga nasashada kabahaas jilicsan ee jilicsan, cagaha duugista iyo cadaadiska gargaarka ka dib shaqo adag. , guriga, qubeyska, dabaasha, hurdada, xerooyinka, qolalka labiska, duugista, isboortiga, gudaha, dibedda, madadaalada, ama meel kasta oo kaliya si aad ugu nasato meel kasta. Wuxuu cagahaaga ka ilaaliyaa jeermiska, caaryada, fangaska, iyo bakteeriyada sagxadaha. Ku habboon xirashada maalinta oo dhan.
Waxaan u isticmaalnaa waxyaabo qaas ah oo qaali ah si aan uga dhigno kabaha soo kabashada ragga iyo dumarka. Tani waxay siineysaa iyaga 200% iska caabin abrasion ka fiican, 10% wax -qabad ka sii wanaagsan, 10% adkeysiga sare, iyo soo -bood ka badan marka loo eego tartanka.
Si ka duwan sida kabaha kale ee sii xumeeya xanuunka fasciitis-ka dhirta, kabaha kabahayadu waxay isku daraan taakulaynta jilicsan ee jilicsan, walxaha naxdinta leh, iyo cidhib yar oo taban si ay u abuuraan sariir cag leh oo bixisa xanuun-yare la dareemi karo. Ku soco adiga oo aan dhib ku qabin kabaha asalka ah ee luuqada leh
Caawinaad si loo yareeyo fasciitis -ka dhirta, ciribta ciribta, cagaha fidsan, arthritis, neuritis, achilles tendinitis, bunions, metarsalgia, esamoiditis, splints shin, hallux rigidus iyo wixii la mid ah. , dabaasha, isboortiga kubbadda cagta, kubbadda, fasaxa, firaaqada iyo shaqada.
Hore: simbiriirixan nin waara QL-835 classical
Xiga: ninkii duugga siibayey QL-1397 raaxo leh
nin neefsanaya siibasho QL-1827 gudaha
ninku wuxuu xiraa QL-1610 moodada neefsashada
ninku wuxuu xirxiraa QL-1912M oo aan caadi ahayn
siibasho nin midab leh QL-1648 feer